Download: Tilmaamaha hufan & dhameystiran ee khibradda xisaabta ku saleysan (ABX) | Martech Zone
Demandbase wuxuu wax ka baddelayaa habka ay shirkadaha B2B ugu baxaan suuqa. Demandbase One waa qeybta ugu dhameystiran ee B2B xal-u-taga suuqa, isku xirka hogaaminta khibrada xisaabta ku saleysan, xayeysiinta, sirdoonka iibka, iyo xalalka xogta B2B sidaa darteed kooxaha Suuqgeynta iyo Iibinta ee shirkadaha ugu waaweyn uguna dhaqsiyaha badan ayaa iskaashi sameyn kara si dhaqso leh, wadaagaan sirdoonka, iyo khibrad koritaanka qarxa.
Madaxa Suuqgeynta, Jon Miller, ayaa qoray oo daabacay ebookgan cusub ee quruxda badan kuna saabsan isbeddelka Suuq-Ku-saleysan Xisaabeed (ABM) ... Khibrad Account-ku saleysan (ABX).
waa maxay Khibrad Xisaabeed Ku-saleysan (ABX)?
Waa fikrad aasaasi ah, oo ku saleysan macaamil-xisaabeed go-to-suuq-ku-saleysan - mid isku-darka ka-qaybgalka suuq-geynta soo-gelaysa saxnaanta iyo beegsiga Suuq-Ku-saleysan Xisaab-xisaabeed. ABX wuxuu kobciyaa dhinac kasta oo khibrada iibsadaha ah inta lagu gudajiro wareegga nolosha ee B2B wuxuuna si aad ah ugafiicnaanayaa fududaynta ABM iyo dalab dhaqameed gen. ABX waa isbeddelka saxda ah ee Suuqgeynta Ku saleysan Xisaabta.
Suuqgeynta B2B ee casriga ahi waxay ku saabsan tahay kor u qaadista dhinac kasta oo khibradda iibsadaha ah, inta lagu jiro wareegga nolosha ee B2B, iyo waxqabadka fudud ee ABM iyo dalab dhaqameed. Waa waqtigii isbeddelka soo socda ee xeeladaha suuqa-tagga ee B2B. Kama sii wadi karno wax isku mid ah isla markaana ma filan karno natiijooyin kala duwan.
Nasiib wanaagse, qaab cusub, habab cusub, iyo tikniyoolajiyad cusub - oo ay wadaan AI iyo xog weyn - ayaa soo ifbaxay si ay u muujiyaan hab wanaagsan oo horay loogu maro shirkad kasta oo B2B ah: Khibrad Xisaab-Ku-saleysan. Waa tan hanuunkaaga rasmiga ah, tilmaamaha dhameystiran ee lagu dabaqaayo muraayadaha udub dhexaadka u ah macaamiisha iyo koontada ku saleysan istiraatiijiga suuqa-tag ee B2B Kujira tusmada:
Maxaa Loogu Talagay Khibrad Xisaabeed?
Nidaamka 5 ABX
Dhis aasaaska xogta koontadaada
Raadi koontooyin muhiim ah
Hawlgal (Fahmi, Shakhsiyee, Xayeysiiso, Isdhexgal, iyo Iskuxidh)
Xir fursadaha adoo iswaafajinaya Suuqgeynta iyo Iibinta
Cabir horumarka kootada
Buug-gacmeedka waxaa sidoo kale ku jira macluumaadka ku saabsan dhismaha kooxdaada ABM oo dhan, sida loo go'aamiyo miisaaniyadda, waxaana ku jira waraaqaha shaqada qaarkood si aad u bilowdo.
Soodejiso Hagaha Cad oo Dhamaystiran Oo Ku Saabsan Khibrad Xisaabeed Ku-saleysan (ABX)
Tags: abmxayeysiinta abmmiisaaniyadaha abmabm ebookhawlgelinta abmfulinta abmabm orchestrationxeeladaha abmabxsafarada xisaabtawaayo-aragnimo xisaabeed ku saleysansuuq geynta xisaabaadkaaixog weyndalabdownloadeBookis dhexgalfree download
Barxada Salonist Spa iyo Salon Platform: Balanqaadyada, Tirinta, Suuqgeynta, Mushahar bixinta, iyo Inbadan
Daabacaha Darbiga: Xalka Daabacaadda Jilicsan ee Darbiyada Gudaha ama Dibadda